✍️: खोज पत्रकारिता केन्द्र and टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: जेष्ठ ११, २०७९
सरकारले विशिष्टीकृत सेवाका चिकित्सकको दरबन्दी नखुलाउँदा अधिकांश चिकित्सक विदेशिन वा निजी अस्पतालमा काम गर्न बाध्य भएका छन्। परिणाम–आम नागरिकका लागि जटिल रोगको उपचार दुरुह भएको छ।
काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयू कक्षमा उपचार गरिंदै।
१० साउन २०७८ मा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भए। जनमैत्री अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका उनी महेन्द्र नारायण निधि अस्पताल ट्रष्टको अध्यक्ष पनि हुन्। ललितपुरको एकान्तकुनामा ‘हेलोइस’ नामक बुटिक अस्पताल खोल्ने योजना अघि सारेका श्रेष्ठले चितवन, नुवाकोटमा पनि अस्पताल खोल्ने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
चिकित्सकको हकहितको लागि खुलेका संस्थाका पदाधिकारीको समेत आफ्नै अस्पताल छ। प्रशासकको कनेक्सन, राजनीतिज्ञसँग र राजनीतिको कनेक्शन मेडिकल व्यवसायीसँग भएकाले नीतिमै प्रभाव परेको डा. सुवेदी बताउँछन्। “विशिष्टीकृत सेवाको दरबन्दी नराख्नु एउटा दृष्टान्त हो, व्यवसायीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर अन्य दर्जनौं अनियमितता गरेका छन्”, डा. सुवेदी भन्छन्।